Waxaa dhamaan ardeyda Somaliyeed ee Dusgiyada sare dhameeyey la ogaysiinayaa in ay Jaamacadaha dalka Ruushka wax ka baran karaan. : Salaan Media
Waxaa dhamaan ardeyda Somaliyeed ee Dusgiyada sare dhameeyey la ogaysiinayaa in ay Jaamacadaha dalka Ruushka wax ka baran karaan.
Waxbarashada Jamacadaha Dalka Ruusha waxaa lagu baranayaa afka igiriisida iyo afka Ruushka, hadii aad afka Ruusha wax kubaranayso qiimaha Fiigu wuxuu ka jabnaanayaa qiimaha af-ingiriisida ilaa iyo 20%. Hadii aad afka Ruushka wax ku barato waxaad helaysaa fursado badan oo ah in aad schoolarship ka hesho dalka Ruushka. Barashada Luqada Ruushka sanadka hore inta aanad gelin jaamacada waxa qiimaheedu kugu tegaysaa xisaabtan hoose:
Fiiga luqada oo sanad ah = $2500. kharajka visaha , caafimaadka iyo cashuuro kala duwan $1800, Kharajka ku baxaysa hurdadaada sanadkiiba waa $800
Dhamaan Total: $5000 kuma jiro tigidhkaagu ! Ardey kasta oo doonaaya in uu Ruushka wax barasho u tago waxaa soo ansixinaaya immigration ka Ruusha. Waxa ardeygu marayaa 5 Talaabo oo kala horeeya si uu visha ardeynimo ugu guuleysto . hadii aad u baahan tahay faah-faahin dheeraad ah oo ku saansan waxbarashada Dalka Ruusha, Ukrain iyo Gorgia ,fadlan la soo xidhiidh magacyadan hoose:
Pharmacy = ====== 5 Years
Nursing === = = 4 Years
= Fees per year for 2 semesters from $ 4000 – $8000
PHD ==== = === 3 Years Fees = $ 4500 Per Year for Two semesters
All Bachelors ===== 4 Years = Fees $ 2500-3000 Per Year
and career advisor United Kingdom.
44+ 07950 341 347
« Immoral implies behaving in a way that violates one’s conscious morality and failure to live with moral values, Part 4
Daawo War Murtiyeed- Manifestada xisbiga Kulmiye iyo beenta ka buuxda oo aqoonyahan Maxamed Ciise soo bandhigay ..10.10.17 »